Wasaaradda caafimaadka ee Puntland oo koox dhaqaatiir ah u dirtay gobolada Mudug iyo Nugaal – Radio Daljir
Wasaaradda caafimaadka ee Puntland oo koox dhaqaatiir ah u dirtay gobolada Mudug iyo Nugaal
Garowe, May 10 -Wasaaradda caafimaadka ee dowladda Puntland ayaa koox dhaqaatiir ah u dirtay degmooyin ka mid ah gobolada Mudug iyo Nugaal oo maalmihii ugu dambeeyay ay ka da?ayeen roobabkii guga.
Ujeedka dhaqaatiirta loogu diray gobolada Nugaal iyo Mudug ayaa salka ku haysa sidii ay u daweyn lahaayeen dadka uu haleelo cudurka maleeriyadda , xilli gobolada Nugaal iyo Mudug ay ka da?een roobabkii guga oo ay suurta galtahay in cudurka duumada uu ka dilaaco.
Dr. C/ kariin Xasan Xuseen oo ah madaxa mashruuca la dagaalanka duumada ee wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa sheegay inay xiligaan dhaqaatiirtu kormeerayaan gobolka Mudug, waxaa uu intaasi ku daray xiligaan socdaalkoodu inuu ku wajahanyahay deegaanada fogfog ee gobolka Mudug.
?Maadaama ay bilowdeen xilli roobaaadkii guga malaariyaduna ay xiriir la leedahay roobabka waxa wasaaradda caafimaadku go?aansatay in dhaqaatiir loo diro gobolada? ayuu yiri madaxa mashruuca la dagaalanka duumada ee wasaaradda caafimaadka oo ku sugan magaalada Gaalkacyo.
Gobolada Puntland ayaa intoobadan waxaa ka curtay roobabkii guga, xilli ay jireen abaaro iyo jiilaal aad u daran.